JC Sheitan Tenet, oo ah farshaxan-gacmeed aan lahayn cududdiisa midig | Tattoo
Shaki la'aan, waxaa jira farshaxanno kuwaas oo tusaale cad u ah is-hagaajinta. Haddii in yar ka hor aan kuu soo bandhignay Tattoo a Brian Tagalog, farshaxan tattoo ah oo aan gacmo lahayn yaa awood u leh inuu cagihiisa ku sameeyo shaqooyin farshaxan oo dhab ah, maanta, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo bandhigo farshaxanle kale oo tattoo ah oo aan sidoo kale ku dari karno liistadan dadka ka adkaaday nooc kasta oo carqalad ama dhibaato ah si ay u gaaraan riyadooda. Waxaan ka hadlaynaa JC Sheitan Tenet.
Sheekha Tenet waa a 32 jir farshaxanno faransiis ah in waxaa ka maqan gacanta midig Iyo, inuu awood u yeesho inuu ku sawiro "gacanta midig", wuxuu adeegsadaa sanaaci ay ku xiran tahay mashiinka sawirka oo uu awood ugu leeyahay sameynta astaamo cajiib ah. Caddaynta tani waa fiidiyaha aad ku awooddo maqaalkan kaas oo farshaxanka tattoo aan gacanta midig ka samayn tattoo.
JC Sheitan Tenet, farshaxanka tattoo oo aan lahayn gacantiisa midig
Sanaaci aad isticmaasho JC Sheitan Tenet Waxaa sameeyay injineer faransiis ah waxna laga badalay oo la waafajiyay si loogu habeeyo mashiinka sawirka sidaan soo sheegnay. Sida laga soo xigtay farshaxanka tattoo, sanaaci kuu ogolaanayaa inaad si loo xakameeyo iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqyada yar ee garabkaaga, iyo inkasta oo aysan weli u oggolaanaynin inuu sameeyo timo adag oo xad-dhaaf ah, haddana wuxuu tilmaamay in goor dhow uu yeelan doono sanaaci kale oo uu ku sameeyo shax iyo farsamooyin kale oo dhammaystiran.
Dhinaca kale, "Steampunk" bilicsanaanta sanaaci ay adeegsadeen Tattoo artist JC Sheitan Tenet iyo taasi waxay siineysaa muuqaal ah mustaqbal-mustaqbal oo runtii isaga aad ugu habboon. Adigana, Miyaad ku sawirnaan doontaa Sheitan Tenet ama farshaxanle kale oo tattoo ah oo aan lahayn mid ka mid ah addimada sare? Shakhsiyan, haddii shaqooyinkaagu fiican yihiin, ma arko sabab aan u diido.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » JC Sheitan Tenet, oo ah farshaxan jireed oo u adeegsada sanaaci inuu ku sawiro
Tattoo-ka lamaanaha jacaylka oo leh macno
Ka taxaddar tattoosyada qaarkood